Hong Kong e-commerce startup Yoho သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် ပွဲထုတ် ခဲ့သည် – Pandaily
Hong Kong e-commerce startup Yoho သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် ပွဲထုတ် ခဲ့သည်
Jun 10, 2022, 21:07ညနေ 2022/06/10 23:01:23 Pandaily
ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ e-commerce လုပ္ငန္း စတင္ တဲ့ Yoho Groupသောကြာနေ့က ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း ၏အဓိက ဘုတ်အဖွဲ့ တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ IPO သည် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂. ၁ မှ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂. ၆ အထိ ရှယ်ယာ ၅၅ သန်း ထုတ်ပေး လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Futu နှင့် CMBC Capital တို့ သည်ဤ IPO တွင် underwriters အဖြစ် ပူးတွဲ ဆောင်ရွက် ကြသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ အစောပိုင်းတွင် Yoho Group သည် စာရင်း လျှောက်လွှာ ကို လွှဲပြောင်း ရန်ကြိုးစား သော်လည်း လိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက် မရရှိ ခဲ့ပါ။ Yoho ဟာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ Listing ေလွ်ာက္ထား တာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ တခ်ဳိ႕ လည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။
Yoho တွင် SKUs ၂၃၀ ၀၀ ကျော်နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော အသင်းဝင် ၈၀ ၇၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ Frost & Sullivan ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်တွင် Yoho သည် အီလက်ထရွန်း နစ် နှင့် အိမ်သုံး ပစ္စည်းများ ကိုအဓိက ထားသော ဟောင်ကောင် ၏ e-commerce ပလက်ဖောင်း တွင် နံပါတ် ၁ နေရာတွင် ရှိပြီး စျေးကွက် ဝေစု ၏ ၅. ၆% ကို ညွှန်ကြား ခဲ့သည်။
၁၈/၁၉၊ ၁၉/၂၀၊ ၂၀/၂၁ နှင့် ၂၁/၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ၏ပထမ ရှစ် လတွင် ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၃၅ သန်း၊ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂၆၀ သန်း၊ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၅ ၂၃ သန်းနှင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၄ ၉၇ သန်း ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ၁၈/၁၉၊ ၁၉/၂၀ နှင့် ၂၀/၂၁ တို့၏ အသားတင် အမြတ် သည် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၂. ၃ သန်း၊ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၈. ၃ သန်းနှင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂၈. ၇ သန်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂၁/၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ၏ပထမ ရှစ် လတွင် အသားတင် အရှုံး မှာ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၃. ၉ သန်း ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:SPAC Vision သည် HKEx တွင်ပထမဆုံး စာရင်းဝင် ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီ၏ အလားအလာ အရ ကုမ္ပဏီသည် IPO မှရရှိသော ရန်ပုံငွေ ၏ ၂၀% ခန့်ကို စျေးကွက် ဝေစု ကိုရယူ ရန်၊ ကျန် ၁၉. ၂% ကို လုပ်သား အင်အား တိုးချဲ့ ရန် နှင့်စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာ များကိုထောက်ပံ့ ရန်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ၁၃. ၇% ကို e-commerce နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်း များမှ ကုမ္ပဏီများ ဝယ်ယူ ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်။ မှတ်သား ထိုက် သည်မှာ ရရှိသော ရန်ပုံငွေ ၏ ၈. ၆% ကို တရုတ်ပြည်မကြီး (အထူးသဖြင့် Great Bay Area) ရှိ ဖောက်သည်များအား အုပ်စု၏ ၀ န်ဆောင်မှု ကိုတိုးချဲ့ ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
Tags E-Commerce | Hong Kong | Hong Kong IPO | YOHO
Choi Choi Reef Report က Ecommerce ရဲ့ ဝင်ငွေပမာဏဟာ IPO ကနေ ခုန်တက်လာပြီး နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ တိုးတက်လာတယ်လို့
တ႐ုတ္ဗီဒီယိုေဝမွ်ေရး ပလက္ေဖာင္းသည္ လ်င္ျမန္ေသာ နည္းပညာျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ လူထုအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူသိရွင္ၾကား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သယ္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးေသာ ေထာက္ခံစာျဖစ္ေသာ (IPO)၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး တက္ႂကြစြာ သံုးစြဲသူမ်ားမွာလည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။